काठमाडौँ, २८ साउन । लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको दुर्घटना बढेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले दुई चालक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विभागले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै प्रस्थानविन्दुबाट २५० किमी वा सोभन्दा बढी दूरीमा चल्ने सवारीसाधनले अनिवार्यरूपमा दुई चालक नराखेको पाइए कारवाही गर्ने जनाएको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक छ/छ घण्टामा पालैपालो सवारी चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एउटै चालकले लामो दूरीमा सवारी चलाउँदा थकानका कारण सवारी दुर्घटनाको दर बढेको विभागको भनाइ छ । विभागले लामो दूरीमा चल्ने यातायातको साधनमा दुई चालकको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सवारी धनीलाईसमेत निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै विभागले मध्यम दूरीका चल्ने सवारीसाधनले पनि प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम लिनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाइ गर्ने जनाएको छ । ऐनमा चार घण्टाभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यातयात व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने पर्याप्त कानून भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । विशेषतः लामो दूरी तथा रात्रि सेवाका सवारी चालक यात्राकै क्रममा निदाउने, थकान तथा तोकिएको समयमै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने मानसिक तनावका कारण दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
विभागले सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको पाइए सम्बन्धित यातायात धनीविरुद्ध कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । गत शुक्रबारमात्रै सर्लाहीको मलङ्गवाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको रात्रि बस पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाटमा त्रिशूली नदीमा खस्दा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही दुर्घटनामा परी एक बालकसहित २० बेपत्ता भएका थिए । रासस
विकास निर्माणमा गुठीको पुरानो कानूनले अवरोध गरेको छ : मन्त्री अर्याल
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ मा
हेगमा उपस्थित भईन् म्यानमारकी नेतृ सुची, नरसंहारबारे जवाफ दिने
नेपालविरुद्ध भुटानको बराबरी गोल
मानव विकास सुचकाङ्कमा नेपाल १ सय ४७ औं स्थानमा
भुटानविरुद्ध नेपालको सुरुवाती अग्रता
निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहनुहुन्छ ? प्रवेश परीक्षाको फाराम खुल्यो
चार नयाँ परियोजना निर्माणका लागि एडिबिसँग ऋण सम्झौता
विद्यासुन्दर भन्छन्- माग्ने पेशा बनाउनेलाई हटाउँछौं
के तपाईले मगन्ते पेशा अपनाउनुभएको छ ? कारवाहीमा पर्नुहोला
कोहलपुरको कर्फ्यु हट्याे
अब कर्मचारी सरुवा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिन नपर्ने
देशभर २० प्रतिशत घट्यो घरजग्गा कारोबार
१३ औं साग : फुटबल र समापनको टिकट मूल्य दोब्बरले बढ्यो
बुहारीलाई बलात्कार गरी सासूको हत्याको मुद्दामा फरार एक युवक पक्राउ
विमानस्थल स्तरोन्नतिको गुरुयोजना अलपत्र
आज जोर नम्बरका सवारी साधन मात्रै चलाउन पाइने
१३ ‍‍औं सागको समापन मंगलबार, कहाँ हुन्छ १४ औं साग ?
काठमाडौँ, २३ मंसिर । नेपालमा जारी १३ औं सागको समापन मंगलबार गरिँदैछ । १४ औं दक्षिण एसियाली खेलकूद पाकिस्तानमा हुने भएको...